Waikīkī 101: fitsangatsanganana feso ho an'ny mpizahatany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Waikīkī 101: fitsangatsanganana feso ho an'ny mpizahatany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Vaovao farany momba ny Hawaii • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ireo mpitsidika voalohany any Hawaii dia tsy maintsy ihaino ny teny hoe Waikīkī rehefa mikasa ny fialan-tsasatra ho any amin'ity paradisa nosy ity. Ho an'ny olona sasany, Waikīkī sy Hawaii dia mitovy dika; farafaharatsiny ho ahy, rehefa miteny amin'ny olona aho fa manana condo ao amin'ny trano fanaovana trano any Hawaii aho dia tena miresaka an'i Waikīkī. Ho an'ny olona maro, i Waikīkī no Hawaii, ary tsy mba mitrandraka mihoatra an'io faritra fizahan-tany io izy ireo; farafaharatsiny tamin'ny diany voalohany. Mazava ho azy, tsy misy olona afaka mitsidika indray mandeha monja; Tonga in-39 aho talohan'ny nividianako ny tranoko teto. Noho ny tendrombohitra sy ny renirano ary ny toerana masina amin'ity fanjakana ity dia tsy miorina amin'ny takelaka ny lalana; lalana miolakolaka miampita sy mihodinkodina etsy sy eroa.
Ny fanjakan'ny Hawaii dia manaiky am-pomba ofisialy ny nosy 137, ao anatin'izany ny nosy efatra ao amin'ny Midway Atoll. Ny antontan-taratasy sasany dia manondro nosy 152, fa ny fanjakana dia fantatry ny nosy lehibe valo ao aminy: Hawaii, Maui, Kahoʻolawe, Lānaʻi, Molokaʻi, Oʻahu, Kauaʻi, ary Niʻihau. Matetika ny sarintany fizahan-tany dia manilika an'i Kahoʻolawe sy Niʻihau, ary matetika ny lisitra fitsangatsanganana dia manilika an'i Lānaʻi sy Molokaʻi. Izany dia mamela antsika amin'i Hawai'i, Maui, Oʻahu, ary Kauaʻi; ireo no nosy efatra manana sidina tsy miato mankany amin'ny tanibe. Ny nosy voalohany, Hawai'i, dia fantatra amin'ny anarana hoe The Big Island na The Volcano Island na Hawaii Island. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia handeha ho any mba hahita an'i Volcanos National Park, ary hiverina any an-tanànan'ny Honolulu, izay misy an'i Oʻahu. Honolulu dia sady tanàna no misy faritany, koa mety hanondro ny faritra an-tanàn-dehibe onenan'ny ankamaroan'ny olona izy io, na mety hiantso ireo toerana rehetra tafiditra ao amin'ny faritanin'i Honolulu, ao anatin'izany ny nosy kely 100 sy atoll kely ao amin'ny faritry ny nosy Hawaii. avaratra andrefan'ny nosy Kauai sy Niihau. Ny maha-teny manjavozavo ny teny hoe Hawai'i, toy izany koa ny Honolulu, dia tsy tokony hahagaga raha toa ka tsy mazava i Waikīkī.
Ho an'ny tanjon'ity orient ity dia i Waikīkī no mpizahatany lehibe ao an-tanànan'ny Honolulu, izay manatrika ny morontsirak'i Waikīkī. Misy fizarana valo izay mandrafitra ity kilometatra roa kilometatra fantatra amin'ny anarana hoe Waikīkī ity. Avy amin'ny ankavia sy havanana, izy ireo dia ny Duke Kahanamoku Beach ao amin'ny Hilton Hawaiian Village, Fort DeRussy Beach Park, Gray's Beach ao amin'ny Halekulani Hotel, Royal Hawaiian Beach, Prince Kūhiō Beach, Queen Kapiʻolani Beach, San Souci Beach, ary Outrigger Canoe Club Beach ( fantatra ihany koa amin'ny hoe Colony Beach).
Namorona fomba iray aho haka sary an-tsary an'i Waikīkī ho an'ireo mpianatro sy namako, tamin'ny fampiasana ny endrika feso feso iray tavoahangy. Ny ambanin'ny tany ambany rehetra dia ny morontsirak'i Waikīkī. Kapiʻolani Park no loha-loha sy tavoahangy tavoahangy, Ala Moana Shopping Center ny tendrony ambony, ary Ala Wai Golf Course ny vodin-tsambo. Raha manosika baolina ny feso, dia ho Diamond / Laterā (Lēʻahi) tendrombohitra / vava ilay feso. Ao ambadiky ny feso dia ao an-tanànan'ny Honolulu. Misy làlana lehibe telo manitatra ny halavan'ny feso. eo an-tampony dia Ala Wai, izay lalana iray mankany ankavia; eo amin'ny farany ambany dia i Kalākaua, izay làlana iray mankany amin'ny tsara. Eo afovoany dia i Kūhiō, izay misy fifamoivoizana amin'ny lalana roa, ary mijanona ny ankamaroan'ny fiara fitateram-bahoaka.
Manakaiky ny fluke an'ny feso dia ny Hilton Hawaii Village. Toerana iray manan-danja io satria io no toerana misy ny afomanga isaky ny zoma alina. Angamba ny toerana manan-danja indrindra ao Waikīkī dia ny Sarivongana Duke Kahanamoku; ity dia azo raisina ho afovoan'i Waikīkī. Ho fanamarihana kely ho an'ny eropeana, ny teny hoe Duke dia manondro ny anaram-bosotra voalohany an'ny mpanafika, tsy anaram-boninahitry ny mpanjaka, ohatra, Duke of Cambridge (Prince William of Wales). Ao amin'ny sarivongan'ilay mpialokaloka dia misy fampisehoana dihy maimaim-poana amin'ny harivan'ny talata sy alakamisy ary asabotsy. Ao ambadik'io toerana io dia ny Hyatt Regency, izay misy tsenan'ireo tantsaha amin'ny talata sy alakamisy 4 hatramin'ny 8 alina. Ao ambadiky ny Hyatt dia misy ny Village Village, misy tsenan'ny tantsaha ny alatsinainy, alarobia, zoma ary asabotsy manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 hariva.
Ny foibe Royal Hawaiian Shopping dia manana kilasy lei maimaimpoana amin'ny fananganana B haavo 3 amin'ny Alatsinainy Zoma amin'ny 1 ora tolakandro. Misy fialamboly maimaim-poana ao amin'ny Royal Hawaiian's Grove talata ka hatramin'ny zoma amin'ny 6 hariva. Ny seho Rock-A-Hula Elvis maimaim-poana koa dia ao amin'ny The Grove amin'ny 7 hariva ny talata sy alakamisy ary asabotsy.
Amin'ny alarobia dia misy tsenan'ny tantsaha ao amin'ny Aloha Tower 11 am ka hatramin'ny 1:30 pm, ary Blaisdell Concert Hall 4 ka hatramin'ny 7 hariva; ireo dia ao an-tanànan'ny Honolulu. Amin'ny Alarobia voalohan'ny volana dia misy fidirana maimaim-poana amin'ny Museum Museum of Honolulu, ary koa amin'ny tanànan'ny Honolulu.
Rava tanteraka ny toerana tsena iraisam-pirenena taloha, afa-tsy ilay hazo banyan mahafinaritra izay manome voninahitra ny toerana. Tranokala vaovao sy mahatalanjona no namboarina nanodidina ilay hazo. Eto dia azonao atao ny mijery ny fampisehoana O Nā Lani Sunset Stories, isan'alina, aorian'ny filentehan'ny masoandro. Manome voninahitra ny Mpanjakavavy Emma malala, ireo seho amin'ny alina ireo dia manasongadina ny tantara, ny fomban-drazana ary ny kolontsaina an'ity toerana fivoriana manokana ity. Fampisehoana manomboka Septambra - Febroary: 6:30 hariva, Martsa - Aogositra: 7:00 hariva. Amin'ny alahady voalohany dia kilasy fanaovana fanaingoana kolontsaina maimaimpoana no atolotra manomboka amin'ny 1 ora ka hatramin'ny 3 hariva. Raha seho dihy iray fotsiny no hitanao dia ity no jerena.
Ny alahady dia misy tsenan'ny tantsaha manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny mitatao vovonana ao amin'ny Ala Moana Shopping Center amin'ny haavo 2 eo amin'ny fiantsonan'ny fiara ambadiky ny Dolce & Gabbana ao amin'ny Station Charging Volta. Ny sabotsy, tsena ao amin'ny Jefferson Elementary School, amin'ny faran'ny làlambe Kūhiō, izay hanombohan'ny Kapiʻolani Park, manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 2 hariva. Matetika ny tsenan'ireo tantsaha dia manana sakafo mafana aroso ao anaty kaontenera Styrofoam, amin'ny vidiny mirary.
Ny toerana lehibe hanaovana fety dia ny Kapiʻolani Park. Raha misy matso dia mety hitranga amin'ny araben'i Kalākaua io, ary hamarana amin'ny valan-javaboary, izay ametrahan'ny mpivarotra tranolay asa-tanana sy sakafo matetika. Indraindray, ny araben'i Kalākaua dia hakatona eo akaikin'ny Duke Statue handraisana mpivarotra zato eo ho eo amin'ny tsenambarotra fety.
Ny mason'ilay feso dia ny lampihazo ao amin'ny valan-javaboary Kapiʻolani. Ny Royal Hawaiian Band dia manome kaonseritra maimaim-poana eto amin'ny alahady tolakandro mandritra ny taona, arakaraka ny fandaharam-potoanany. Rehefa misy karazana festival mozika, azo inoana fa hatao eo amin'ny fantsona.
Na dia mirefy roa kilaometatra aza ny morontsirak'i Waikīkī dia tsapako fa ny faritra tsara indrindra hananganana ny eloo dia eo ampitan'ny Kapiʻolani Park. Hahita trano fivarotana sy trano fidiovana eto ianao, ary tsy be olona toy ny faritra akaikin'ny Duke Statue. Misy mpiambina napetraka eto ho an'ny fiarovana fanampiny.
Ny bottlenose izay iarahan'ny Paki Avenue sy ny Kalākaua Avenue no azo inoana fa ny toerana lavitra indrindra izay hivezivezy ao Waikīkī ny mpizahatany iray, raha tsy hoe mizotra mankany amin'ny Diamond Head ianao. Ao amin'ity faritra ity dia misy lalana roa Kalākaua Avenues, izay mety hiteraka korontana; ny iray mandeha mankamin'ny Diamond Head (ny fanambanin'ny vavan'ny feso, ary ny iray kosa mandeha amin'ny lalana mifanohitra (misy ny vavan'ny feso).
Raha azonao atao ny mahita an-tsokosoko tena goavambe mivoaka avy amin'ny lavaka, ity no lalana ankapobeny hahitanao ny Dolphin Quest (milomano miaraka amin'ny feso,) Hanauma Bay Nature Preserve (toerana trondro maroloko an'arivony tonga ao aminao) sy Life Life Park (toerana ahafahanao milomano miaraka amin'ireo feso, mijery ny critters an-dranomasina manao fikafika).
Magic Island, eo amin'ny tendrony fluke amin'ny sari-feso feso, dia toerana tsara handehanana an-tongotra, bisikileta, hijerena ny filentehan'ny masoandro, fihazakazahana, na fitsangatsanganana BBQ. Misy dabilio marobe miatrika ny ranomasina, fotodrafitrasa fandroana, fandroana mangatsiaka, alokaloka maro, ary farihy iray izay tsara ho an'ny filomanosana raha te hisoroka ny onja mahery ianao. Ento ny kiraronao vatokely na crocs satria misy akorandriaka be eto amin'ity torapasika ity. Misy fijanonana malalaka maimaimpoana, ary mety hahita kamiao sakafo mivarotra hazan-dranomasina vaovao mandritra ny andro ianao. Toerana mahafinaritra ity hijerena ireo mpanao surf, lakana sambo, ary sambo mandalo mandalo - ary afaka mankafy ny afomanga ianao isaky ny zoma alina. Ity no faritra amoronan'i The Howard Hughes Corporation toeram-pilalaovana ho an'ireo miliardera manerantany.
Raha tsy miliardera ianao fa manana karatra Medicare dia alao antoka fa ho entinao any Honolulu io. Ny fampisehoana ny karatra dia ahafahanao mitaingina ny bus ho an'ny $ 1 isaky ny mandeha, na $ 2 ho an'ny mandalo tontolo andro. Tena mora ampiasaina ny aotobisy rehefa mandeha avy eo amin'ny Magic Island mankany Kapiʻolani Park.
Araho ny mpanoratra, Anton Anderssen Eto.